I-YUFA inamalungu angaphezu kwama-300, kubandakanya i-ofisi yomphathi jikelele, iofisi, isebe lezemali, isebe lokubonelela, isebe lezentengiso, isebe lophando nophuhliso, isebe lokuhlola umgangatho, isebe lobugcisa bemveliso, umasifundisane wemveliso namanye amasebe. Isebe ngalinye lenkampani linecandelo elicacileyo lezabasebenzi, i-YUFA ilawula inkampani ngokungqinelana nemigaqo yenkampani. Emva kweminyaka engama-30 yophuhliso, i-YUFA iqokelele ubutyebi bamava kunye nokusebenza ngokuzinzileyo kunye neengcinga zeshishini eziphambili, amanqanaba aphezulu olawulo kunye nenzuzo engcono.
I-YUFA idlulile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001-2015 kunye nokuqinisekiswa kwenkqubo yokusingqongileyo ye-ISO14001-2015. Ulawulo olucwangcisiweyo luzisa ukusebenza okuphezulu kwinkampani kunye nomgangatho ongcono wenkonzo kubathengi.
Njengeyunithi elawulayo yeHenan Refractories Association, i-YUFA iseke ubudlelwane bokusebenzisana neYunivesithi yaseHenan yeTekhnoloji kunye nezinye iiyunivesithi ezininzi, zalungiselela abafundi beekholeji ukuba beze kwinkampani beza kufundiswa qho ngonyaka. Abasebenzi benkampani ngoku basebatsha kwaye banolwazi olunobutyebi, benza imeko yokusebenza yokusebenzisana kunye nokuncedisana.